Frantsa : Fanalàna Azy Ho an’ny Tontolon’ny Tweet Ny Fampielezan-kevitra Hofidiana ho Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2011 16:23 GMT
Ao amin'ny bilaoginy, Sarkofrance dia miteny amintsika fa taorian'ireo fifidianana savaranonandon'ny antoko sosialista, dia naniry mafy i Nicolas Sarkozy ny mba hiresahana ny momba azy (indray).
Sarkofrance manohy fa mikasika izay indrindra , ny UMP, antokon'ny eo amin'ny fitondrana no sady maro an'isa, dia nanapa-kevitra :
Ny Talata tolakandro ary dia nisy ny ny fifanarahan'ny UMP. Tomponandraikitra efapolo eo ho eo avy amin'ny maro an'isa, ka ny dimiambinifolo minisitra ary ny mpanolotsaina amin'ny fifandraisana an'Atoa Sarkozy, no nivory ny Talata alina mba hiresaka momba ny hiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena.
Tao amin'ny twitter @MehdiYanis avy amin'ny bilaogy Pudding à l’arsenic dia nanapa-kevitra hamaly bontana amin'ny fandefasana ny tenifototra #UMPanique izay tanaty ora vitsy dia efa tafapetraka ho eny antampon'ny tontolon'ny fandefasana bitsika ho an'ireo miteny frantsay noho ny fifandimbiasan'ireo teny tsara sy ireo fanehoan-kevitra maneso. Ohatra:
Faly mahita ny #UMPanique eo alohan'ny #toiaussiparticipealaconventionump – #ianaokoamandraisaanjaraaminfifanarahanaump (nalefan'ireo mpiandany amin'ny UMP)
Efa ela tokoa no tsy niàla liana toy izany ny tontolon'ny fandefasana bitsika frantsay araka ny anamafisan'i @mathieulinares azy :
Tena efa ela tokoa aho no tsy mba nihomehy toy izao teto amin'ny Twitter !! Misaotra ny #UMPanique sy ny #conventionUMP
Andraso kely, tena mpanao hatsikana marina ireto #UMPanique, “Bond, je m'appelle … Euro Bond” ireto
#UMPanique Sahala amin'ny any aminà téléthon izany ny tena miaraka amin'ny milina fanaovana kajin-dry zalahy
Arf, ny fitaovam-panisàna miaraka amin'ny feon'ny vata sarihana fampirimam-bola, sahala amin'ny hoe any amin'ny magazay Juste Prix. Hiato aho fa tsy vitako intsony. #UMPanique #conventionUMP
#UMPanique“tsy azontsika avela ho an'ity fitondrana sosialista ity ny Frantsa-ntsika”. Fifangaroan-teny milaza zavatra betsaka
Miaraka amin'izay fahalalàna rehetra nahafantarako ny zanak'olombelona, ahoana no hihinana am-bolony izay lazaina ao amin'ny#UMPanique ny mpikambana UMP
Ny hany fahombiazana tokona hitan'ny UMP tato anatin'ny 5 taona, dia ny olona rehetra nanjary nifantoka bebe kokoa amin'ny PS . #UMPanique #ZéroBonneFoi
Ny zavatra mety hampitokiky ahy, dia i Carlita mety ho teraka androany 🙂 #UMPanique (Carla Bruni-Sarkozy izay antsoin'ny vadiny hoe Carlita dia efa miandry andro hahaterahana sisa)
Nefa, tsy ny tontolon'ny havia ihany no be kiana sy maneso, ilay bilaogera @ZeFML dia nanoratra lahatsoratra iray ao amin'ny bilaoginy izay ny lohateny dia mamaritra tsara ny toe-tsain'ny sasantsasany ao amin'ny elatra havanana : Ci-git l’UMP…